Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Fifandraisana amin'ny fizahan-tany TAAI miaraka amin'ny fizahan-tany Gujarat
Conclave fizahantany TAAI
Ny Fikambanan'ny Travel Agents of India (TAAI) dia nanao Conclave Fizahan-tany nanomboka tamin'ny 9-12 martsa 2021, nalamina niaraka tamin'ny fizahan-tany Gujarat.
Natao ity hetsika ity mba hampianarana ny mpikambana mpivarotra dia sy hampiroborobo an'i Gujarat ho toerana fizahan-tany ho an'ny mpizahatany ao anatiny sy anatiny.
Ity hetsika ity dia mba hiantohana ny fianaran'ny mpikambana amin'ny faritra mba hampiroborobo sy hamelombelona ny fampiroboroboana ny fizahantany.
Ireo mpikambana TAAI dia tokony ho vonona amin'ny hevitra sy paikady vaovao hiantohana ny fizahan-tany any India ho fanamorana azy ireo amin'ny fomba milamina.
Ny TAAI Tourism Conclave dia nahita mpikambana avy amin'ny faritra 20 sy toko manerana an'i India nandray anjara tamin'ny hetsika 3-alina, 4 andro tao Kevadia. Natao ny hetsika mba hampianarana ireo mpikamabana mpivarotra dia sy hampiroborobo an'i Gujarat ho toerana fizahan-tany ho an'ny mpizahatany an-toerana sy ho an'ny mpizahatany, hoy ny filohan'ny TAAI Ramatoa Jyoti Mayal. Ny mpikambana ao amin'ny varotra dia nandalo fotoan-tsarotra noho ny areti-mandringana COVID-19 ary izany dia nanararaotra azy ireo handray ny fanovana sy ny fahaizany mizaha, hoy izy.
Ny delegasiona mpikambana dia niaina ny trano sy fotodrafitrasa tao amin'ny City City 1 sy Tent City 2 tao Kevadia miaraka amina fitsangantsanganana hariva fisakafoanana manamorona ny Renirano Narmada miaraka amin'ny sakafo hariva amin'ny vondrona 2. Ny fizahana ny sarivongana avo indrindra eto an-tany amin'ny Statue of Unity (SoU), Jungle Safari, Tetikasa Dam Sardar Sarovar, Valley of Flowers, ary Cactus & Butterfly Garden dia notanterahina. Ny Statue of Unity mampiseho an'i Iron Man of India, Sardar Vallabh bhai Patel, dia kendrena hanome aingam-panahy ireo taranaka miaraka amin'ny fahitan'i Sardar Patels ny firaisankina, ny fitiavan-tanindrazana, ny fitomboana misy ary ny fitondrana tsara tantana. Ireo solontena dia nitsidika ireo zaridaina 5 tao anatin'ny Arogya Van (Herbal Garden) izay mampiseho karazana zavamaniry fanafody sy ny tontolon'ny fahasalamana. Nitsidika ny sehatry ny fiantsenana ara-kolontsaina ao amin'ny Ekta Mall ao amin'ny faritra SoU ihany koa ireo mpikambana.
Ity fandraisana andraikitry ny TAAI ity dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpikambana amin'ny faritra mba hampiroborobo ny Dekho Apna Desh ary hamelombelona ny fampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny sy anatiny amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao sy traikefa manokana, hoy ny filoha lefitra Jay Bhatia.
Fizarana raharaham-barotra antsasak'adiny no nokarakaraina tamin'ny 11 martsa 2021, izay natolotr'i Hon. Minisitry ny fizahan-tany, governemanta ny India, Shri Prahlad Singh Patel, tamin'ny alàlan'ny hafatra an-tsary. Noraisiny ny fandraisana an-tanana ny TAAI, izay nametraka ohatra manan-tantara momba ny fahatsapana noho ny fiovan'ny fotoana. Nanampy izy fa ny mpikambana ao amin'ny TAAI dia manana ny lafiny rehetra amin'ny fikambanana matihanina momba ny fizahantany ary amin'ny ho avy dia hitombo ny andraikitra sy ny fanamby rehefa manomboka mitsidika azy ireo ny mpizahatany ao India. Ireo mpikambana TAAI dia tokony ho vonona amin'ny hevitra sy paikady vaovao hiantohana ny fizahan-tany any India ho fanamorana azy ireo, hoy izy.
Andriamatoa Jenu Devan, Komisiona momba ny fizahantany sy fizahan-tany MD-Gujarat, dia niresaka tamin'ny conclave tamin'ny alàlan'ny antso an-tsary mivantana izay nanasongadinany ireo fandraisana andraikitra nataon'ny governemanta tamin'ny fampiroboroboana an'i Gujarat ho an'izao tontolo izao ary nisaorany ny komity TAAI nitondra ny mpikambana ao aminy any SoU, any Gujarat ary nanome toky ihany koa ny fanohanana sy ny fankaherezana feno ho an'ireo mpikambana amin'ny fampiroboroboana an'i Gujarat ho tanjona tsara.
Hon. Ny sekretera jeneraly, Andriamatoa Bettaiah Lokesh dia nanome topy maso ny fotoam-pandraharahana milaza fa, ny kabary fanokafana dia manokatra maso ary vina ho an'ireo mpikambana amin'ny fizahan-tany any an-toerana nataon'ny filoha Jyoti Mayal. Lahatsary iray natao ho an'ny mpanelanelana toa an'i Dr. Achyut Singh Jt ny dinika an-dàlana notarihin'ny filoha lefitra Jay Bhatia momba ny Bharat ka Vikas - Fanamafisana ny fizahan-tany ao an-toerana. Tale jeneraly- Indian Railways (IRCTC) izay niresaka momba ny fampifandraisana ny mpizahatany hatramin'ny kilometatra lisitra ary ny fomba ahafahan'ny mpikambana TAAI mampiroborobo ny fonosana lalamby amin'ireo mpandeha manerana an'i India. Nisy ihany koa ny famelabelaran-kevitra nataon'i Dr. Singh ho an'ireo mpikambana hisoratra anarana sy hifandray amin'ny IRCTC. Andriamatoa Ajay Kumar Wadhawan, Lehiben'ny varotra ao amin'ny Air Asia India dia nandray anjara tamin'ny tontonana tamin'ny fitanisana ny fomba fijerin'ny seranam-piaramanidina vaovao sy ny fifandraisana amin'ny rivotra manerana ny seranam-piaramanidina kely kokoa any India. Ny filohan'ny TAAI teo aloha, Andriamatoa Balbir Mayal dia nanome ny heviny momba ny fiovan'ny dinamika eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany tao anatin'izay folo taona lasa izay sy ny fomba hahatongavan'i India ho fizahan-tany ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao miaraka amin'ireo tetik'asa iraisan'ny TAAI momba ny fahaizana sy ny fahaizana manabe. miaraka amin'ny birao fizahan-tany, zotram-piaramanidina, lalamby sns.
Nanaraka izany ny fifanakalozan-dresaka iray momba ny «Where Winners Play» tontonana iray notontosain'Andriamatoa Ashish Gupta, mpanorina - Strategy Pluto ary CEO an'ny Consulting an'ny FAITH. Adihevitra mahasalama miaraka amin'ny IATA ary ny fiasa no natao tamin'i Andriamatoa Rodney Dcruz, Asst. Tale IATA izay nanolotra ny fomba fijery, ny fomba fijery ary ny ho avin'ny IATA. Ny HSG, Bettaiah Lokesh dia nisolo tena ny TAAI ary izy no feo maneho ny olana lehibe amin'ny maha mpikambana ao amin'ny IATA sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Andriamatoa Sunil Kumar Rumalla, filohan'ny UFTAA dia nanome fomba fijery manerantany momba ireo fanamby atrehin'ireo agents manerana an'izao tontolo izao miaraka amin'ny IATA ary nanome tolo-kevitra soso-kevitra ho an'ny IATA mba hiantohana ny fahaveloman'ny seranam-piaramanidina ary koa ireo agents.
Resadresaka nifanaovan'ny Andriamatoa Amish Desai, talen'ny TAAI Karnataka Chapter niaraka tamin'i Ramatoa Parineeta Sethi, Lehiben'ny famoahana sy mpampanonta ny Pinnacle Connect, orinasam-baovao malaza amin'ny fahasalamana sy haitraitra miaraka amin'i Ramatoa Vasdha Sondhi, MD Om Marketing. Ramatoa Jyoti Mayal, Lehiben'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fahaiza-mandray vahiny (THSC) dia nandray anjara tamin'ny tontolon'ny tontolon'ny adihevitra momba ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny teknolojia, marketing ary fahaizana. Miaraka amin'ny fahaizany amin'ny varotra, varotra, PR ary haino aman-jery sosialy, teknolojia ary fivoarana ny fahaiza-manao, nanolotra soso-kevitra ny mpikaroka ny amin'ny fomba ahoana ny mpikambana TAAI izay mandroso ankehitriny dia tokony hikatsaka sy homena hery miaraka amin'ny fahaiza-manao rehetra ankoatry ny fanomezana serivisy. Nohavaoziny koa ny hetsika ho avy hataon'ny WITT (Women in TAAI and Travel), izay hiverenan'ny TAAI amin'ny fiarahamonina ary hanome hery ny vehivavy ho tonga mpandraharaha amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao sy ny asa atao hahatonga an'i India toerana fizahan-tany azo antoka sy azo antoka.
Mankasitraka ny ezaka sy ny fandraisana andraikitry ny Governemanta Gujarat sy ny fizahan-tany Gujarat hanasana ny TAAI sy ny mpikambana ao aminy any SoU, Hon. Mpitahiry vola nasionaly-TAAI, Andriamatoa Shreeram Patel tamin'ny latsa-pisaorana nataony dia nanasongadina ny andraikitry ny TAAI amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny varotra. Nisaotra ny fahitan'i Hon izy. Minisitry ny fizahan-tany Andriamatoa Jawahar bhai Chavda, izay niaraka tamin'ny fizahan-tany sekretera lehibe - Gujarat, Ramatoa Mamta Verma, Komisiona fizahan-tany ary MD an'ny fizahan-tany Gujarat, Andriamatoa Jenu Devan ary Andriamatoa Nirav Munshi - Mpitantana ara-barotra (Travel & Marketing) miaraka amin'ny ny tompon'andraikitra hafa dia nanohana tanteraka ny TAAI. Misaotra ihany koa ny Indigo Airlines izay hany kaompaniam-piaramanidina tokana izay niantoka ny solontena isaky ny vazan'i India nifandray tamin'i Gujarat ho an'ity conclave ity.
Mpikambana maro hafa manerana ny firenena no halamina miaraka amin'ny birao fizahan-tany momba ny fizahan-tany atsy ho atsy izay hanabe, hahay ary hanome hery ireo mpikambana ao amin'ny TAAI hampiroborobo ny Incredible India, hoy Ramatoa Jyoti Mayal.